Cake voatavo Halloween - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
fitsangatsanganana184 minitraOlona 8
Raha vantany vao hitako ity hevitra tao amin'ny Magazine Thermomix, efa fantatro fa tiako izany. Ka dia nihazakazaka nividy ireo akora namboarina mba hanaovana azy avy hatrany.
El voatavo sy mofomamy walnut Efa nanao imbetsaka aho, saingy toa ahy ny haingo tonga lafatra ho an'ny andro Halloween. Tsotra be ny manao azy satria miaraka amina volom-boasary makirana miloko volom-boasary kely, dia mamadika mofomamy misy mofo tonga lafatra ho an'ity daty ity isika.
Ny mofomamy dia matsiro, miaraka amina kanelina matsiro. Toa tsy mampino ny fomba ahatsoakan'ny mofomamy legioma iray matsiro be. Raha tsy lazaintsika hoe inona izany dia sarotra ho azy ireo ny maminavina.
1 Cake voatavo Halloween
Mofomamy tsotra hankalazana ny Halloween.
Fotoana fiomanana: 3H
Fotoana hiketrehana: 4M
Fotoana manontolo: 3h 4M
Ho an'ny mofomamy:
Kennel 100 g
250 g voatavo, voahitsakitsaka ary tapatapahina
Kanelina 1/2 sotrokely
200 g ny lafarinina mofomamy
Vovoka fanaovana mofo 1 sotrokely
Sotro fihinanana 1/2 sotrokely
dibera hanosotra ny bobongolo
Siramamy aisy 350
Ranom-boasarimakirana 1 sotrokely
10 niloko fandokoana sakafo voasary (tsy nanana aho ary nasiako loko miloko mavo sy niloko mandra-pahazoako ilay loko volomboasary)
50 g ny fondant sôkôla
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 180º izahay ary manosotra lasitra boribory 24 sm. amin'ny savaivony misy dibera kely. Namandrika izahay.
Apetrakay ao anaty vera ireo kennel ary atsaharo mandritra 3 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 5. Isika dia manala sy mitahiry ao anaty lovia.
Tsy manasa ny vera isika dia manampy ny voatavo, voahopakopa ary manapaka an-tsoratra. Izahay dia manao fandaharana 30 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 5. Miaraka amin'ny spatula, ampidinintsika ny sisa tavela izay eo amin'ny rindrina sy eo amin'ny saron'ny fitaratra, mankany amin'ny lelany.
Ampianay ny atody, ny siramamy, ny diloilo ary ny kanelina. Izahay dia manao fandaharana 15 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 6.
Ampio ny lafarinina, ny masirasira, ny soda ary ny sira. Afangaro mandritra ny 4 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 3.
Izahay dia mametraka ny kennel, mamandrika ary mamarana ny fampifangaroana ny zava-drehetra amin'ny spatula.
Arotsakay ao anaty lasitra voahosotra io fangaro io ary alao mandritra ny 45-50 minitra, amin'ny 180º.
Miankina amin'ny karazana lafaoro ny fotoana, ka alohan'ny hanesorana azy dia hanindrona azy amin'ny paompy isika ary raha mivoaka madio dia vonona.
Mamelatra azy izahay ary mamela azy hangatsiaka amin'ny talantalana.
Rehefa mangatsiaka dia apetrantsika amin'ny lovia izay hanompoantsika azy.
Namadika azy aho mba hamelako ny ampahany fisaka amin'ny fotony amboniny mba ho tsara kokoa ny sary voatavo.
Ao anaty vera madio sy maina, ampio ny siramamy ary atobohy ho azy 15 segondra, hafainganana mandroso 5-7-10.
Izahay dia manampy ny atody fotsy, ny ranom-boasarimakirana ary ny rano mitete avy amin'ny fandokoana sakafo. Izahay dia manao fandaharana 10 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 6.
Raha mbola tsy nafangaro tsara na sarotra, dia manamboatra 10 segondra hafa isika amin'ny hafainganam-pandeha mitovy ary mandra-pahatongany ho toy ny crème.
Niparitaka tamin'ny mofomamy izahay tamin'ny alàlan'ny spatula iray nopotserina tao anaty rano mafana. Avelantsika ho maina mandritra ny 2 ora.
Atsoninay ao anaty microwave ny tsiranoka sôkôla, mandrafitra 20 segondra ary jereo hoe manao ahoana izany.
Manampy 10 segondra indray mandeha izahay mba tsy handoro antsika, mandra-pahatongan'ny fahavononany.
Nataonay tao anaty kitapo mofomamy misy lavaka kely ary namboarinay ny sarin'ireo voatavo (vava, orona, maso), amin'ilay ranomandry efa maina.
Avelantsika ho maina ny sôkôla ary hanompo.
Fanazavana fanampiny - Mavo sy voatavo
Loharano - Gazety Thermomix®
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Halloween, atody, Mihoatra ny 1 ora sy 1/2, Postres, Resipeo ho an'ny ankizy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Recipe manokana » Halloween » Cake voatavo Halloween
Vane dia hoy izy:
Izaho dia olom-baovao amin'ny thermomix, mila fomba fanamboarana mora aho hahazoana ny fanantonana azy
Mamaly an'i vane
Vane, heveriko fa ao amin'ny bilaoginay dia hahita mora sy matsiro be dia be ianao. Jereo ny Index Recipe dia ho hitanao ny fomba hahitana vitsivitsy izay tianao. Mandrosoa ary ataovy izy ireo ary lazao anay hoe manao ahoana ianao? Mirary ny soa indrindra.
m anjely dia hoy izy:
Ny pie poma tsy misy siramamy, ho an'ny diabetika, dia tafavoaka ny maty. Efa mieritreritra ny hanao iray hafa aho. Misaotra betsaka.
Valiny tamin'i M. angeles
Tena tsara M. M.! Mofomamy tena matsiro izay azon'ny olona voan'ny diabeta ankafizina ary tsara izany. Mirary ny soa indrindra.
Tiako be ilay izy fa efa ananako vonona hahantona ao amin'ny forum mundorecetas, fa raha tsy miravaka toa anao aho dia mbola tsy manana ireo tanana ireo hahaha
Thermo, azoko antoka fa raha haingoinao io dia toa tsara lavitra noho izaho izy io. Manao zavatra lehibe ianao. Misaotra betsaka anao nahita anay. Mirary ny soa indrindra.
bateria dia hoy izy:
Salama, vao nividy an'io fahagagana io aho ary io no eritreretiko. Hianatra zavatra betsaka ianao ary manararaotra miarahaba sy misaotra anao aho
Valiny amin'i Pili
Tongasoa, Pili!. Manantena aho fa tianao ny resinay ary manampy anao hampiasa ny Thermomix izy ireo ary hanararaotra izany. Misaotra betsaka anao nahita anay. Amin'ny fiarahabana.
Tsara daholo ny mofomamy anao, efa nanao vitsivitsy aho ary mivoaka matsiro izy ireo androany tsy maintsy nataoko ity ilay crème tsy nataoko fa ny fahitana ireo fanehoan-kevitra dia hataoko azo antoka fa famihinana
Misaotra betsaka, Alicia. Manantena aho fa tianao koa ity. Mirary ny soa indrindra.
Maida dia hoy izy:
Salama, ity resipeo ity noezahiko namboarina, saingy tsy hitako ny fandokoana. Aiza no hividianako azy?
Oroka lehibe. Miaraka amin'ny olona toa anao mahandro mahaliana kokoa, lazainay aminay ny fomba fahandro, toy ny hoe ny namana no manoro anao. Aza avela handao anay mihitsy.
Valiny tamin'i Maida
Salama Maida, misaotra indrindra amin'ny fanehoan-kevitrao. Mividy ny fandokoana amin'ny fivarotana an-tserasera toy ny "clubcocina", "julienne" na "world of pastry" aho. Amin’ny toeram-pivarotana sasany, toa ny Carrefour, dia mivarotra loko telo ao anaty fonosana izy ireo, izay matetika mena, mavo ary maitso na manga. Raha mampifangaro loko mena sy mavo ianao dia ho tonga amin'io loko io amin'ny sary. Mirary ny soa indrindra.
ny cupcake voatavo mahafinaritra.
Lucia Garcia dia hoy izy:
Te hahafantatra aho raha voatavo manta na masaka ny voatavo ato amin'ity mofomamy ity .. .. Misaotra
Valiny tamin'i Lucia Garcia
Salama Lucia, manta.
Salama e! Mikasa ny hanao izany amin'ny faha-31 aho, fa satria ny vadiko sy ny zanako lahy dia manokana manokana, dia hanao mofomamy mahazatra sy handravaka azy aho. Hizaha izay lazain'izy ireo. Fa amin'ny herinandro ambony dia te-hanao ny fomba fahandro voalohany ho an'ny namana sasany aho. Ny tena marina dia tsy azoko an-tsaina mofomamy spaonjy voatavo, fa ilaina ny manandrana azy.
Raha ny fanazavana, hitako teo amin'ny fivarotana ambongadiny eo ho eo amin'ny 5 euro ny fandokoana, ka eny, manana fandokoana volomboasary aho mandritra ny fotoana kelikely, haha.
Nahita ny fantsona Carrefour aho omaly, saingy nahasarika ny saiko fa mety hisy fiantraikany amin'ny sain'ny ankizy izany, heveriko fa satria misy alikaola ao anatiny.
Holazaiko aminao izany. Tiako ny bilaoginao.